China Healthy oven lafaoro manana fahaizana mahandro tsara kokoa Manamboatra sy Factory | SANXIA
Famaritana:Φ250 * 120mm
lanja:Manodidina ny 5,6kg
Fananganana vy mafy, ity vilany ity dia mizara ny hafanana tsy miovaova hatrany ambany ka hatrany amin'ny sisin-tany. Izy io dia afaka mitazona hafanana tsara kokoa ka mijanona ho mafana mandritra ny fotoana maharitra ny sakafonao. Azonao atao ny mahandro sakafo ao an-dakozia na any an'ala.
Fampisehoana fahandroana ambony
Ny etona tsy miraikitra dia tonga tsy misy akora simika manimba ka 100% azo antoka ny mahandro miaraka aminy. Ny endrika varingarina sy ny sisin-tany matevina dia mampifanaraka azy amin'ny lakozia rehetra. Izy io dia afaka manafana mitovy ary mitazona tsara kokoa ny hafanana
Namboarina tamin'ny vy namboarina ary namboarina tamin'ny teknolojia vita amin'ny vanim-potoana, ity lafaoro holandy lalina ity dia matanjaka tsara hijoro amin'ny tontolo ivelan'ny tontolo ivelany. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikohanay&oldid=18870716 ''
Famolavolana antsipirian'ny vokatra
ny fonony lovia lalina dia mampitombo ny fikorianan'ny rivotra ho an'ny fandrahoana sakafo; mora tadiavina tadivavarana amin'ny sarony dia mora entina ity vilany ity. Ny lafaoro holandey manerantany. Ny tongotra tsy mitongilana amin'ny vilany sy ny sarony dia mamela ny lafaoro hipetraka tsara eo ambonin'ny afon-dasy; ny sarom-bilany koa azo ampiasaina ho toy ny takelaka fanaendasana.
Fantatra amin'ny anarana hoe Pot iray mandritra ny androm-piainany. Raha ampitahaina amin'ny vilany misy fitaovana hafa, ny Oven Holandey dia vita amin'ny vy vy avo lenta ary haharitra mandritra ny androm-piainana raha karakaraina tsara. Azo ampiasaina amin'ny fatana sy amin'ny lafaoro ao an-trano izy io, manome lanja ny vola.
Mitsitsy angovo ary tsara amin'izany ho an'ny tontolo iainana. Ny hafanana dia zaraina sy tazonina mitovy, izay mahatonga azy io ho tsara amin'ny fanendasana lalina, ny famaohana ary ny fanaovana mofo. Izy io koa dia manana tombony amin'ny insulate heat be sy tombo-kase tsara, ka na dia ny camper novice aza dia mahavita akoho natsatsika matsiro amin'ity vilany ity.
Raha vantany vao vita mahandro ianao dia tsotra ny manadio sy aorian'ny fikarakarana. Hamarino tsara fa maina tanteraka ny vilany aorian'ny fanadiovana ary raha mbola mafana ny vilany, menaka maivana ao anaty lapoaly miaraka amin'ny menaka safidinao, palitao manify no ilainao. Mampiasà lamba na lamba famaohana taratasy mba hanosehana ny fihoaram-pefy.
Teo aloha: Ny fanendasana vy fanendasana vy miaraka amina tapa-kazo tokana dia tsy mora raikitra raha tsy misy sarona
Manaraka: Skelet vy vy vy sofina roa mahazo loka mena teboka mena
nantsoina hoe Skillets Iron Cast, namel Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, Cast Iron Skillet, ncoated Cast Iron Skillet, xtreme Iron Skillet,